Monitor လုပ်သားများအတွက်အကောင်းဆုံးဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာ ၁၀ ခု OMG Solutions
Monitor လုပ်သားများအတွက်အကောင်းဆုံး 10 အကောင်းဆုံးဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာများ
သုတေသနပြုချက်အရ CCTV ကင်မရာများ အသုံးပြု၍ လုပ်သားအင်အားကိုစစ်ဆေးရန်အလုပ်သမားများ၏အမြတ်အစွန်းနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အဖွဲ့အစည်းများထိုသို့ပြုရသည့်အကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိသောအခါ၌ဖြစ်ပွားနိုင်သောအကြမ်းဖက်မှု၊ ခိုးမှုနှင့်အခြားရာဇ ၀ တ်မှုများကိုကာကွယ်ရန်။ ဒုတိယအနေဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုသေချာစေရန်ထိန်းချုပ်မှုအခန်းမှလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်နှင့်မမျှော်လင့်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပွားပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အဖြစ်အပျက်၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်တံဆိပ်ပါသော CCTV ဗီဒီယိုဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများကိုတင်ပြနိုင်သည်။ တတိယအနေဖြင့် ၀ န်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အခြားစွမ်းရည်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်သမားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်နေလျှင်ဤနေရာတွင်သင်၏လုပ်သားများကိုစောင့်ကြည့်ရန်အသုံးပြုသင့်သည့်ထိပ်တန်း 10 CCTV ကင်မရာများဖြစ်သည်။
SPY306- စူပါ NIGHTVISION USB Charger CAMERA:
လုံခြုံရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်မည်သည့်ကုမ္မဏီမဆိုဤရာဇ ၀ တ်မှုနှုန်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်မြင့်တက်လာသောကြောင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်စွန့်ခွာလိုသည်။ သာမန် CCTV ကင်မရာများသည်ပုံမှန်မျက်စိဖြင့်ဖမ်းမိရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်သင်ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဒီနေ့ခေတ်တွင်လုံခြုံရေးကင်မရာတစ်လုံးဖြစ်ရန်မမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည်လုံခြုံရေးတစ်ခုခုထက်ပိုစောနေလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းအားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိမြင်စေဘဲအရာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်လိုသောမော်နီတာအလုပ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်ပါက။ SPY-306 သည်သင်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လျှို့ဝှက်ကင်မရာသည်အားသွင်းစက်အတွင်း၌ထည့်ထားသဖြင့်၎င်းကိုအလုပ်သမား၏အခန်းထဲရှိအပေါက်ထဲသို့ထည့်။ သူတို့၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများကိုသတိပြုမိနိုင်သည်။ ညဘက်မြင်ကွင်းကင်မရာပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည် 4K resolution အထိမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးအနိမ့်ဆုံးအလင်းရောင်တွင်ပင်ပြည့်စုံသောလုံခြုံမှုကိုသေချာစေနိုင်သည်။ စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်နေရာမှမဆိုဝယ်ယူသောမည်သည့်နေရာမှမဆိုအလုပ်သမားများအားတိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးနိုင်သည်။
SPY297 - WIFI နာရီကင်မရာ
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသူခိုးများ၊ ဓားပြများနှင့်အဖြူကော်လာရာဇ ၀ တ်သားများသည်လည်းသူတို့၏အတွေးအမြင်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်း၌တရားမ ၀ င်သောအရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်သည့်အခါ CCTV ကင်မရာများသည်အလွယ်တကူအားနည်းချက်များနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာစေသောအရာများကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမကြည့်ရှုသင့်ကြောင်းသေချာသည်။ ဤအခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသော်လည်းလုံခြုံရေးအစောင့်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်သူတစ် ဦး ကသူသည်အရာရာတိုင်းအပေါ်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိနေစေရန်သေချာစွာမလိုချင်ပါ။ SPY297 သည်လုံခြုံရေးဌာနတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နေသူသို့မဟုတ်ပုံမှန်ရုံး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်တရားဝင်အစိုးရ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဦး ဖြစ်သည့်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏အလုပ်ကိုသာလုပ်သည်။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သေးငယ်တဲ့ gadget ကိုသင့်ရုံးခန်းရဲ့ဘယ်နေရာမဆိုနေရာချထားနိုင်ပြီး alarm နာရီ FM ရေဒီယို၊ ကြိုးမဲ့စပီကာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်လုံခြုံရေးကင်မရာလိုမျိုးအမူအယာအမျိုးမျိုးနဲ့အတူထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့အရာအားလုံးကိုအပြည့်အဝအာမခံချက်ရယူနိုင်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၊ သင်သည်မည်သည့်နေရာအတွက်မဆိုသင်၏ပြီးပြည့်စုံသောမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် ၀ န်ထမ်းများ၏စားပွဲပေါ်တွင် တင်၍ သူတို့၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခိုးမှုကိစ္စများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများသည် ၀ န်ထမ်းများ၏ဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အပြုအမူများကိုလည်းခြေရာခံနိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းများအတွက်လျော်ကြေးနှင့်မက်လုံးအစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင်အလုပ်ပုံစံနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားအပ်နှံခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ရာတွင်သင့်အားကူညီသည်။
SPY296 - WIFI ROUTER ကင်မရာ
Wi-Fi သည်ယနေ့ခေတ်ဌာနတိုင်း၊ အိမ်များသို့မဟုတ်အများပြည်သူသွားရာနေရာအားလုံးနီးပါး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိရာဇ ၀ တ်မှုများတွင်ဖြစ်ပွားနေသောရာဇ ၀ တ်မှုပြwithနာများနှင့်အတူဤကြိုးမဲ့နည်းပညာမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ နာရီနှင့်နာရီများအတွက်ဖျော်ဖြေရေးပေးနိုင်သည့်ဤသေးငယ်သောအရာဝတ္ထုသည်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအတွက်လုံခြုံရေးစပေးလျှင် Monitor လုပ်သားများအတွက်မည်မျှကြောက်စရာကောင်းမည်နည်း။ သင်၏စိတ်ကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် SPY296 သည်အလုပ်ကိုအတိအကျလုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်သင်လိုချင်သော resolution အတိုင်းအတာအရ 4K / 2K နှင့် 720p ကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးအခြေခံများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် 128 GB အထိ SD ကဒ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ပြီး Wi-Fi Router အနေဖြင့်အသုံးပြုရန်အခန်းရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆို၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်မည်သည့်မော်နီတာမှမဆိုအခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရန်အားသာချက်များကိုပေးသည်။ ! ၀ န်ထမ်းများနှင့်အခြားအေးဂျင့်များကအဖွဲ့အစည်းအားပြင်းထန်။ အန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ရပ်များမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်အတူ ၀ န်ထမ်းများကိုအလုပ်သမားအခွင့်အရေးနှင့်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများအားထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့တွင်အထောက်အကူပြုသည်။
SPY263 - Bluetooth Speaker SPY Hidden Cam:
သင့်တွင်ဂီတစတိုးဆိုင်တစ်ခုရှိပါကအားလုံးအဆင်ပြေသွားမည်ဆိုပါကသင့်တွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုရှိပြီးနောက်ကွယ်တွင်လုံခြုံရေးအစောင့်တစ်ယောက်ရှိနေသည်။ သို့သော်နောက်တစ်စက္ကန့်တွင်ဓားပြတစ် ဦး ဝင်လာပြီးသူမြင်တွေ့လိုက်ရသည့်အရာမှာလုံခြုံရေးကင်မရာဖြစ်သည်။ Boom, သင်၏တစ်ခုလုံး setup ကိုပြာမှလွ။ ထိုကဲ့သို့သောမသေချာမရေရာသောအပြုအမူများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်၊ သင်သည် SPY2K3 ကဲ့သို့တစ်ခုခုရသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်၊ ယခုထိုအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာထူးခြားသနည်းဟုငါ့ကိုမေးလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ အရိုးရှင်းဆုံးအဖြေကတော့သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်သင့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့သင်ဆိုင်ထဲ ၀ င်လာတဲ့သူတွေကိုတစ်ခုခု ၀ ယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မင်းမှာရှိတာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်သလိုမည်သည့်နည်းလမ်းနှင့်မဆိုသင့်ငါးမန်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုစောင့်ကြည့်နေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤတီထွင်ဆန်းသစ်သောစပီကာကင်မရာသည်အသံပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကိုထောက်ပံ့ပေးရုံမက ၀ န်ထမ်းများ၏အန္တရာယ်ကျရောက်လွယ်သောလုပ်ရပ်များကိုတရား ၀ င်နှင့်အလွတ်သဘောသတ်မှတ်ချက်များတွင်ဖမ်းယူနိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းများ၏လုပ်ရပ်များနှင့်အာဏာပိုင်များကိုစုံစမ်းရန်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများ၊ ဒီကင်မရာဟာရုပ်ပုံနဲ့အသံနှစ်မျိုးစလုံးကိုသက်သေပြနိုင်အောင်အရင်းအမြစ်ကောင်းတခုဖြစ်တယ်။ ဒီကိရိယာပေါ်မှာတေးဂီတကိုသင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်လက်တော့မှ Bluetooth မှတဆင့်နေ့စဉ်စက္ကန့်တိုင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်တယ်။
SPY204 - ဆလင်ဒါလုံခြုံမှုဝိုင်ဖိုင်ကင်မရာ
ရာဇ ၀ တ်သားတွေရဲ့စိတ်ကိုအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ပေးတဲ့လုံခြုံရေးဟာအံ့သြစရာကောင်းပြီးအဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုလည်းသေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် သာမန် CCTV ဒီဇိုင်းများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး၎င်းတို့ရွေ့လျားပုံကိုပုံမှန်မျက်စိဖြင့်မည်သည့်အရာများကိုမဆိုစစ်ဆေးရန်အလွယ်တကူခွဲခြားနိုင်သည်။ SPY204 ကို Cylinder ဒီဇိုင်းနှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်နေအိမ်ဖြစ်စေ၊ ရုံးခန်းဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စေနောက်ကွယ်တွင်အေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ရှေ့မှောက်၌လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်စေမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနေရာမရွေးထည့်နိုင်သည်။ ပင်အခါသမယမှာမဆိုမသေချာမရေရာပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်လုပ်နေစဉ်းစားသည်။ သင်ဤလှည့်ကွက်လေးကိုကြည့်ပြီးသင်ဘာဖြစ်သွားသည်ကိုသူတို့တောင်မှမသိနိုင်တော့ပါ။
SPY165 - WIFI Charger ကင်မရာ
အစောပိုင်းက Wi-Fi router များမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိဘဲလျှို့ဝှက်လုံခြုံရေးများကိုလျှို့ဝှက်စွာရယူရန်မည်သို့ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကပြောခဲ့သည်။ အကယ်၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်လျှင်ကော။ အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုမမြင်နိုင်တဲ့သာမန်လူတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်ကော၊ သူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်၊ ​​မကြည့်ဘူးလားဆိုတာတော့ငါပြောနိုင်လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် SPY165 ၏ဝင်ပေါက်ကိုရောက်သောအခါဖြစ်သည်။ 180 ဒီဂရီလှည့်ကင်မရာနှင့် 1080p ဖန်သားပြင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအင်္ဂါရပ်များဖြင့်အတူ။ လုံခြုံရေးဌာနတစ်ခုကဒီ gadget ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ထောင့်မှာလိုချင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကသာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်စရာမလိုဘဲမည်သည့်ဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံမှုကိုမဆိုအာမခံပေးနိုင်သည်။ စောင့်ကြည့်နေတဲ့မန်နေဂျာနဲ့နောက်ကျောကကောင်လေးကသူတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲသေချာအောင်လုပ်ထားတယ်။
SPY088 - WIFI AIR လတ်ဆတ်သောကင်မရာနှင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း -
လုံခြုံရေးတိုင်းတာမှုများကိုတပ်ဆင်သည့်အခါမည်သည့်စတိုးဆိုင်၊ ရုံး၊ သို့မဟုတ်ပုံမှန်အိမ်အမျိုးအစားကိုမဆိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ပျားတွေလိုပဲလှည့်နေတဲ့ကင်မရာများနဲ့ပတ်ပတ်လည်နေရာတိုင်းမှာ ၀ ိုင်ယာကြိုးတွေဟာဌာန၊ စတိုးဆိုင်၊ အိမ် (သို့) ကုန်တိုက်ကြီးတခုခုရဲ့အခန်းတစ်ခန်းရဲ့အစွန်းကိုအကောင်းဆုံးပုံစံမပေးပါဘူး။ သင်၏လုံခြုံရေး ဦး ခေါင်းသို့မဟုတ်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတစ် ဦး ကိုအခက်အခဲတွေ့နေစေသည့်အနေဖြင့်သင်၏အစက်အပြောက်သည်ထူးခြားမှုရှိကြောင်းသေချာစေရန်သင်အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ SPY088 ၏ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ အခုဒီဟာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ သင်ရနိုင်သမျှလွယ်ကူသည်၊ ၎င်းအခန်းကိုစောင့်ကြည့်မည့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်လက်တော့မဆိုဆက်သွယ်ရုံမျှမကအခြားသာမန် CCTV ကင်မရာကဲ့သို့၎င်းကိုအလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းပါ။ ဤအရာသည်အိပ်ခန်းငယ်များ၊ တိုက်ခန်းငယ်များ၊ မီးဖိုချောင်များစသဖြင့်သေးငယ်သည့်အခန်းများကိုမျက်ခြည်မပြတ်စေရန်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်နေရာတစ်ခု၏အသွင်အပြင်ကိုရှုပ်ထွေးစေလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်တတ်နိုင်သလောက်ရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်သကဲ့သို့အလားတူအကောင်းဆုံးလုံခြုံမှုသည်မျက်စိကိုမမြင်နိုင်သည့်လုံခြုံစိတ်ချရသောဝန်းကျင်တွင်အသက်ရှင်သန်နေစေရန်သေချာစေသည်။
SPY175 - WIFI ပါဝါ BANK CAMERA:
မင်းသည်သူ၏ကိုယ်ရံတော်များနှင့်အတူအမြဲတမ်းခရီးသွားနေသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသူနှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အစည်းအဝေးများနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယများအတွင်းအနည်းငယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေလျှင်သို့မဟုတ်သင်သူသည်သူတစ်ပါးကိုအန္တရာယ်ပြုရန်ကြိုးစားနေလိမ့်မည်ဟုသူထင်သောနေရာတွင်ရှိနေသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါက သူ့ကိုဘယ်သူမှတက်မလာနိုင်အောင်ကူညီပေးချင်သည်။ SPY175 သည်သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော buddy တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ gadget သည် Wi-Fi ထိန်းချုပ်ထားသော back back ကင်မရာဖြစ်ပြီး SD card ကို 128 gab အထိအထောက်အပံ့ပေးသည်၊ လုံးဝနိမ့်ကျသောအခြေအနေများနှင့်မှတ်တမ်းများကိုပင် 4K အထိအရည်အသွေးဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါကမရူးဘူးလား!? ယခုတွင်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များကိုသင်၏လုံခြုံရေးပြfromနာများမှလျှို့ဝှက်ထားရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ သူတို့သည်အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်ရှိနေလျှင်သို့မဟုတ်အကွာအဝေးမှဝေးကွာသွားသော်ငြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲအဆင့်အတန်းလုံခြုံရေးကိုသေချာစွာစောင့်ရှောက်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်လူတိုင်းကဒီနေ့ဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့် Power bank လိုမျိုးဘယ်သူ့ကိုမှသံသယဝင်မလဲ။
SPY032 - ဝိုင်ယာလက်မဲ့ Wifi Wi-Fi ထောက်လှမ်းသော PINHOLE ကင်မရာ
အချို့လူများက၎င်းတို့အနီးအနားရှိစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်ကင်မရာများနှင့် gadget များရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်သူတို့၏လုံခြုံရေးအဆင့်ကိုအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြသည်။ သူတို့ကတစ်ယောက်ယောက်ကိုသူတို့မပေါ်လာဘူးလို့သူတို့အနားမှာထိုင်သလိုခံစားစေချင်တယ်။ ယခု Cloak နည်းပညာကိုကြေငြာခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်၎င်းသည် SPY032 ကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် gadget ၏ကြေညာချက်ဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ဤသေးငယ်သောအရာသည်သင်၏အဝတ်အစားများကဲ့သို့သင်နှင့်ကပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းအားစောင့်ကြည့်နေသူအားသူလိုအပ်သည့်ထောင့်တိုင်းနှင့်လုံခြုံရေးအဆင့်အတန်းကိုအာမခံပေးသည်။ ဤခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်သည့်အရာသည်၎င်းအား ဆက်၍ ဆက်၍ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်ဘက်ထရီနှင့်အတူပါလာသည်။ 70 နာရီအထိအချိန်အတွက်အလွန်တကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်သော 100 နာရီ standby နှင့်အတူ။ ဒီသေးငယ်တဲ့ pinhole ကင်မရာဟာမင်းရှပ်အင်္ကျီအောက်မှာတောင်တစ်ခုခုကိုသိုဝှက်ထားနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပြီး၊ သင့်မှာ privacy အပြည့်အ ၀ ရှိနေပြီးသင်ဟာအရာဝတ္ထုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့နေရာမှာအရာအားလုံးကိုမျက်လုံးချင်းကြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။
SPY208 - ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ရက်မှစပီကာကင်မရာ -
အကယ်၍ သင်ဟာဂီတအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ရင်၎င်းရဲ့အလှဆင်ခြင်းနှင့်ပုံစံကိုမပျောက်စေဘဲသင်အမှန်တကယ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဘယ်လိုသိမ်းဆည်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုအထက်တွင်ဖော်ပြပြီးပြီ။ အကယ်၍ သင်သည်တေးဂီတစတိုးပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘဲတေးဂီတတွင်သာပါဝင်နေသူဖြစ်လျှင်ကော။ ဟားဟား၊ အဲဒါမှန်တယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ SPY208 အကုန်လုံးကိုမင်းအတွက်ဖုံးထားပြီလား။ ၎င်းသည်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်သာမကလုံခြုံရေးအတွက်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်အချိန်ကုန်ခံပြီးအရာအားလုံးကို controller ၏မျက်လုံးအောက်တွင်ရှိနေစေရန်နှင့်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဂီတနှင့်အတူအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးပြည့်ပြည့်ဝသောအချိန်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှတုန်ခါနေစေသည့်သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာသည်မည်သည့်နေရာမှမဆိုတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုပါ။ ဤ buddy သည်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌ရှိသောသူအားသင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်၌ဖြစ်ပျက်နေသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်း၏ 4K resolution မှတ်တမ်းတင်နိုင်သောကင်မရာဖြင့်အားသွင်းပါ။ ၎င်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ စတိုင်ကျလှသောကြောင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သောပြီးပြည့်စုံသောသေးငယ်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအရာသည်အလွန်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သော်လည်းလုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုမည်သူမျှစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
4253 စုစုပေါင်း Views စာ 1 Views စာယနေ့တွင်